डाक्टरले ६ महिना बाच्दैन भनेका रञ्जितको पाँच वर्षपछि पुस्तक उपहार – Health Post Nepal
डाक्टरले ६ महिना बाच्दैन भनेका रञ्जितको पाँच वर्षपछि पुस्तक उपहार
२०७७ माघ २५ गते १६:४८
प्रा. डा. मुरली रञ्जित उमेरले ६५ पुगे। ६०औं जन्मदिन मनाइरहँदा उनले क्यान्सर भएको थाहा पाए।
सबैमा जन्मदिनको उत्सव थियो। उता रञ्जितलाई आकास खँसे झै, जमिन भाँसिरहे झै भइरहेको थियो।
उनी आफूलाई सकारात्मक सोच राख्ने भएकाले त्यो उत्सवमा उनलाई कसैको मन खल्लो पार्नु थिएन। सबैसँग हाँसिरहे, जन्मोत्सवको खुसी साँटिरहे।
क्यान्सर एउटा डरलाग्दो रोग हो। क्यान्सरले शरीरका कोषिकामा अनियन्त्रित वृद्धि भइँ मानव जीवनमा प्रभाव पार्नेगर्छ।
यो रोगलाई जित्न औषधी मात्रै प्रभावकारी हुँदैन। उच्च आत्मबलको पनि त्यही नै महत्व हुन्छ।
रञ्जित प्रोस्ट्रेट क्यान्सरबाट ग्रसित थिए। जब उनले क्यान्सर भएको थाहा पाए निकै नाजुक अवस्थामा पुगिसकेका थिए।
उनकै शब्दमा भन्ने हो भने उनी प्रोटेस्ट क्यान्सरको छैठौं स्टेजमा पुगिसकेका थिए। र, नेपालमा डाक्टरले ६ महिना नबाँच्ने बताएका थिए।
डाक्टरले भने पनि उनी कति पनि आत्तिएनन्। मन दरो पारे। सँगै भएकी श्रीमतीलाई सम्झाए। भएको जग्जाजमिन बेचेर उपचारका लागि भारत गए। त्यहाँ पनि उनको उपचारमा संलग्न डाक्टर आत्तिएका थिए। तर, रञ्जित आत्तिएनन्। उच्च मनोबलका साथ उनले क्यान्सर रोगलाई जिते।
उनले आफूलाई ६ महिना बाच्दैनस् भन्ने डाक्टरलाई ६ वर्ष पुगेको दिन फूलको गुच्छा लगेर सम्मान प्रकट गर्ने योजना बनाएको बताए। उनी डाक्टरको दायित्व बिरामीको मनोबल खस्काउने नभएकाले उनी मृत्युको घोषणा गर्न नहुने तर्क गर्छन्।
नेपाली चिकित्सकमा टिम वर्कको अभाव रहेको उनको अनुभव छ। नेपालमा टिम वर्क भए धेरै समस्या यतै समाधान हुने प्रा. रञ्जितकार बताउँछन्।
६ महिना बाच्दैनस् भनेका रञ्जितकारले क्यान्सर जितेको पाँच वर्ष भइसकेको छ। उनले आफूले त्यो अवस्थामा कसरी क्यान्सर जिते भन्नेबारे एउटा पुस्तक लेखेका छन् ‘क्यान्सरसँगको लडाइँ’।
मेडिसिटी अस्पतालमा आज सोही पुस्तकको बिमोचन भयो। अंङ्कोलोजिष्ट डा. पंकज बर्मन, युरोलोजिष्ट डा. महेश अधिकारी, केशव अमात्य फाउन्डेसनकी तारा अमात्यलगायतले पुस्तक बिमोचन गरे।
पुस्तक बिमोचन लगत्तै रञ्जितका ६ वर्षीय नानीले फूलको गुच्छा दिँदै हजुरबाको दीर्घायुको कामना गरे।
नातिले दीर्घायुको कामना गरिरहँदा रञ्जितको आँखामा आँशु भरिएको थियो। ‘६ महिना बाच्दैनस् भनेको व्यक्तिले ६ वर्षको नातिबाट क्यान्सर जितेको पाँच वर्षपछि यसरी फूलको गूच्छा दिन्छ भन्ने मैले सोचेकै थिइन। मलाई क्यान्सर हुँदा मेरो नाति एक वर्षको थियो’, उनले भने।
उनले क्यान्सर भएकाले सबैले उच्च मनोबल बनाउन र क्यान्सरका बारेमा बुझुन भनेर यो पुस्तक प्रकाशन गरेको बताए।
यस्तै, मेडिसिटीका युरोलोजी विभागका प्रमुख डा. महेशबहादुर अधिकारीले रञ्जित आफूलाई अन्तिम चरणको प्रोस्टेट क्यान्सर भएको जानकारी दिँदै करिब १० महिना अगाडि आएको बताए। उनले मृत्यु जित्न निकै ठूलो आत्मविश्वासका साथ क्यान्सरलाई प्रास्त गरेको बताए। कुनै क्यान्सर पीडित आउँदा आफूले रञ्जितकै उदाहरण दिनेगरेकी उनी बताउँछन्।
‘क्यान्सर बिरामीका लागि रञ्जित उदाहरणीय व्यक्ति मात्र होइनन्। उनी उर्जाको स्रोत पनि हुन’, उनी भन्छन्, ‘यो पुस्तकमा थुप्रै अनुभूति लेख्नुभएको छ। यो जीवन्त अनुभूतिलाई सबैले पढ्नुपर्छ।’
मेडिसिटी अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशन बिजय रिमालले क्यान्सरबाट बोलिरहेको मानिस कुन बेला स्वास छोड्छ थाहै नहुने बताए।
क्यान्सरविरुद्धको लडाइमा सबै अस्पताल रहेको बताए। उनले नेपालमै क्यान्सर रोगीका लागि सेवा दिनु सबै अस्पतालहरूको दायित्व भएको बताए।